अन्धराष्ट्रवादी मानसिकता र फिजीकरणको त्रास-रामसुकुल मण्डल - Yatra Daily
Home समाज अन्धराष्ट्रवादी मानसिकता र फिजीकरणको त्रास-रामसुकुल मण्डल
अन्धराष्ट्रवादी मानसिकता र फिजीकरणको त्रास-रामसुकुल मण्डल
कुनै विषयका बारेमा कसैको मानसिकतामा ‘त्रास’ले बास गरेपछि त्यो ‘त्रास’ सहजै निस्कन गाह्रो हुन्छ । यसलाई चिकित्सकीय भाषमा ‘फोबिया’ भनिन्छ । यस्तो फोबिया थरीथरीको हुन्छ । नेपालमा भारत फोबिया धेरै पुरानो छ । नेपालको भारतसँग पुरानो र ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । खुला सिमानाले गर्दा जनता–जनता बीच हुने सम्बन्ध स्वाभाविक भएपनि तात्कालीन राजपरिवार, भाइभारदार, सेना प्रहरी, ठूला कर्मचारीहरू, उद्योगी व्यापारीहरूको तदनुरूपको सम्बन्धका अलावा वैवाहिक सम्बन्ध पनि रही आएको छ । नेपाल र भारतको सम्बन्ध राजनीतिक रूपमा भन्दा पारिवारिक सम्बन्ध रहेको पाइन्छ । प्राचीनकालदेखि नै रहिआएको सम्बन्धको रूपमा मानिन्छ ।
उत्तरमा चीनको भोट तिब्बतसँग पनि नेपालको सम्बन्ध रहेको छ । परम्परागतरूपमा भोट तिब्बतको सम्बन्धभन्दा भारतकै सम्बन्ध विस्तारित रहेको छ, त्यसमा भने शंका छैन । भारत स्वतन्त्र भएपछि राजनीतिक कारणले पाकिस्तानबीच तारको बार खडा भएपनि नेपालसँगको सीमा खुला नै रहेको पाइन्छ । कतिपयले नेपाल भारतबीचको सम्बन्धलाई पनि तारले बाँड्नु पर्ने मान्यता राख्ने अन्धराष्ट्रवादीहरूको कमी भने छैन नेपालमा । यो त्यसै भएको पनि होइन । राजनीतिक दुनो सोझ्याउन भारत विरूद्धको विषवमन गर्ने योजना तहत गरिएको पाइएको छ । यस्तै यस्तै योजना अन्तर्गत भारतीय मूलका महेन्द्र चौधरी फिजिमा प्रधानमन्त्री भएपछि त्यसलाई निहुँ बनाएर नेपाललाई फिजि बनाउन भारतले लागिपरेको स्यालहुँइया मच्चाएको बेला देख्नेलाई लाज हुने अवस्था सिर्जना भएको तिनले पत्तै पाएन । मधेशीलाई भारतीय देख्नेहरूले भारतीय भूखण्डबाट भागेर कालान्तरमा नेपाल आएर शाहवंश स्थापना गर्नेहरू भारतीय नहुने र महेन्द्र चौधरी भारतीय हुने दृष्टिकोणको तुलना एवं परीक्षण गर्नु पर्ने हो कि होइन् ।
देशलाई फिजि बनाउने योजनाकै प्रभावबाट प्रभावित भएकाहरूले फेरि त्यो विषयलाई नागरिकताको विवादको आवरणमा उठाएका छन् । तत्कालीन नेकपा एमालेका नेताहरूले मधेशीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अहिले पनि सुधार गरेका छैनन् । तिनीहरूको दृष्टिदोष कायमै रहेकोले नागरिकताका सवाल उठ्दा जहिले पनि मधेशीको राष्ट्रियता माथि प्रश्न तेस्र्याउने गरेका छन् ।
भारतमा शासन गरिरहेका उपनिवेशवादी बेलायती शासकले भारतको मोतिहारी चम्पारण क्षेत्रका मानिसलाई भेडाबाख्रा जस्तो बलपूर्वक फिजि मारिसस, ट्रिनिडाड जस्ता उपनिवेशमा उनीहरूको शोषण गर्न लगेका थिए । पुस्तौंपुस्ता उनीहरू त्यहीं बसे र उनीहरूको श्रमको शोषण त्यहाँ भएको हो । फिजिहरूले सहेको शोषण भन्दा कम शोषण उनीहरूले फिजिमा सहेका छैनन् । त्यहाँका फिजि र भारतीयहरू दुबै उनीहरूकै गुलाम जस्तै कार्य गरे । जब फिजि उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो त्यतिखेर फिजि र त्यहाँका भारतीय दुबै त्यहाँको नागरिक भए । यसरी फिजिमा महेन्द्र चौधरीहरूको इतिहास रहेको पाइन्छ ।
नेकपाका एक नेताले युपी र विहारका आधा जनसंख्यासँग नेपाली नागरिकता रहेको मिडियामा अभिव्यक्ति दिएका छन् । यो अभिव्यक्तिको व्यापकरूपमा आलोचना पनि भएको छ । तर, यस्ता अभिव्यक्ति दिने नेताको अध्ययन, सुझबुझ र मानसिकताबारे सबैले सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । उनले यस्ता अभिव्यक्ति दिँदा पहिला यथार्थ के हो त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ । भारतको युपी र बिहारको जति भूगोल छ त्यति भूगोल नेपालको पनि छैन । त्यहाँको जनसंख्या यहाँभन्दा बढी छ । आफूलाई ठूला राष्ट्रवादी देखाउन मधेशीलाई भारतीय भन्ने र भारतलाई
गाली गर्नेहरूको मानसिकता नै यस्तै रहेछ । यस्ता अन्धराष्ट्रवादी समूहका अगुवाहरूको कमी भने छैन । जसले मधेशलाई चरन र मधेशीलाई दास बनाउने मनोवृति बोकेका छन् ।
ओलीको युपी बिहारको त्यो अभिव्यक्ति त्यसै आएको थिएन । ओली पनि पहिलाका अन्धराष्ट्रवादी नै हुन् । भारत विरोधी नारा लगाउने दिनको स्कूलिङमा फर्केर नागरिकताको सन्दर्भमा फिजिको उपमा लागिएका भारतीयहरूको मानवअधिकार प्रतिको हमला हो भने मधेशीहरूमाथिको हमला हो । किनभने त्यतिखेर नेपाली भूभागका केही मधेशीहरूलाई पनि भारतीयहरू जस्तै ती देशमा लगिएको थियो । त्यसैले यस्ता विषयमा अभिव्यक्ति दिँदा होस पु¥याउनु पर्ने आवश्यक्ता छ । मधेशीलाई सम्मान दिएर अधिकार दिएर संविधान संशोधन गरी नयाँ राष्ट्रियताको निर्माण गर्ने बेलामा यस्ता अभिव्यक्तिले कसको हित हुने होला त्यसबारे हेक्का सबैले राखे राम्रो हुने देखिन्छ ।
पुराना अन्धराष्ट्रवादी मानसिकतालाई फेर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । अब वंशजको आधारमा नागरिकता दिने विषयमा चिन्ता केही हदसम्म जायज होला । नागरिकताको डण्डा अन्य विदेशीहरूका लागि होइन मधेशीहरूका लागि बनाइएको हो भन्ने विषय कसलाई थाहा छैन र ? नागरिकता विदेशीले लिएमा कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने हुन्छ । तर आधारभूत मानवअधिकारलाई हनन हुने गरी कानुन बनाउनु किमार्थ हुँदैन । यस्ता अभिव्यक्ति फिजिकरणको त्रासमा आएको बाहेक अन्य केही देखिँदैन । कसैमा फिजिकरणको त्रास बाँकी भए नेपालमा फिजिकरणको चरण सकियो बुझे हुन्छ ।
नेपालमा सदियौंदेखि बसोबास गरिरहेका आदिवासी, जनजाति, मधेशी, मुस्लिमलगायतका समुदायमाथि बेलाबखतमा राष्ट्रियताको सवालमा प्रश्न खडा हुने गरेको छ । यहाँका शासकहरूले मधेशीलाई भारतीय देख्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्नुपर्छ । मधेशीको राष्ट्रियता माथि शंका गर्ने मानसिक रोगीहरूले पहिला आफ्नो इतिहासको बारेमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
Previous articleनारामै सीमित ‘समृद्ध नेपाल’-डी.जे. मैथिल
Next articleयातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जमा ३१ हजार घुुस सहित रोशन र सुनील पक्राउ